Maxaa ka jira in PSG ay qandaraas cusub u soo bandhigtay Adrien Rabiot?… Waxaa jawaab ka bixisay isaga hooyadiis – Gool FM
Maxaa ka jira in PSG ay qandaraas cusub u soo bandhigtay Adrien Rabiot?… Waxaa jawaab ka bixisay isaga hooyadiis
Dajiye June 27, 2019
(Paris) 27 Juunyo 2019. Hooyada dhashay xiddiga reer France iyo kooxda PSG ee Adrien Rabiot iyo wakiilkiisa ayaa waxay wada beeniyeen, wararka ay dhawaan wargeysyada sheegeen ee ku aadanaa in maamulka Paris Saint-Germain ay u soo bandhigeen heshiis cusub uu ku sii joogayo garoonka Parc des Princes.
Waxaa la fahamsan yahay in mustaqbalka 24 jirkan reer France uu noqday mid ka baxsan kooxda Paris Saint-Germain, kaddib marka uu soo idlaado qandaraaskiisa xagaagan.
Yeelkadeeda, warar ka soo baxaya gudaha Faransiiska ayaa waxay sheegeen in Adrien Rabiot uu ka codsaday Juventus inay fursad siiyaan kaddib markii uu agaasimaha cusun ee ciyaaraha kooxda PSG ee Leonardo uu u soo bandhigay qandaraas cusub.
Si kastaba ha ahaatee, hooyada dhashay Adrien Rabiot ayaa u sheegtay wargeyska RTL Véronique:
“Waxaan doonayaa inaan si rasmi ah u beeniyo, waxaan akhriyay in Adrien Rabiot uu iska diiday la kulanka Leonardo ama uu iska diiday inuu qandaraas cusub saxiixo”.
“Ma jiraan wax wada hadal ah ee dhex maray isaga iyo Leonardo, waxaan kala hadlay telefoonka tan iyo markii uu ku soo laabtay kooxda, waxaana ku niri si qadarin ay ku dheehan tahay nabad galyo”.
“Ma jirin dalab horey, ama mid hadda ah, mana jiro wax dalab ah”.
“Waad ogtahay in kubadda cagta ay wanaagsan tahay inaadan wax arag, haddiiba aysan jirin wax rasmi ah” ayeey hadalkeeda ku soo gabagabeeysay hooyada dhashay Adrien Rabiot.
Paul Pogba oo ku wargaliyay saaxiibadiis talaabada xigta uu qaadi doono
Gabdhaha England oo gaaray Afar dhammaadka Koobka Adduunka ee Dumarka 2019 kaddib markii ay garaaceen Norway... + SAWIRRO